Kuyiqiniso yini ukuthi izixhumanisi zangemuva zangempela manje zingu-goldmine?
Ama-Backlink angemuva mhlawumbe isici esibaluleke kunazo zonke ngokuphathelene nokwakha isixhumanisi ku-Search Engine Optimization (SEO). Into yokuthi akuzona zonke izixhumanisi ezidalwa ezilinganako - zibeka kalula, izinjini ezinkulu zokucinga (njenge-Google ngokwayo, kanye ne-Yahoo ne-Bing) zinika isisindo esithile ezinhlobonhlobo ze-backlinks. Phakathi kwamanye, izixhumanisi zangemuva zangasese ezitholakala ekhasini eliyisiqalo lewebhusayithi yakho yebhizinisi eliyinhloko noma ibhulogi kuzohlale ihlanganisa izixhumanisi ezibaluleke kakhulu namandla amakhulu kangaka enjongo ye-SEO.
Kungani Bebaluleka Ngakho?
Ngakho-ke, uqinisile - ngemuva kokuxhumeka kwangokwemvelo manje kubhekwa njengamathuba e-goldmine wangempela. Abanye abantu bawabiza ngokuthi "iGrail Elingcwele ye-SEO. "Kungani bayakwazisa lokho? Kungenxa yokuthi uma ukhona phakathi kwalabo abafuna igunya lewebhu noma ibhulogi ukuba likhule ekuthandeni - lolu hlobo lwezixhumanisi yilokho okudingayo ukujabulela inqubekela phambili enjalo ngokushesha.
Yini eyenza ama-backlink angemuva ngokuchazwa?
Ngokucabangela lonke isikhathi sekhasi eliyisiqalo le-Backlink Contextual esikalini, sizame ukuliphula igama ngezwi ukuze siqonde kangcono. Okokuqala, i-Ikhasi eliyisiqalo liyisiqalo sewebhu esiyingqayizivele esisendleleni yokuphequlula okuqukethwe kuwo wonke amasayithi noma ibhulogi. Okwesibili, Okuqukethwe kwezixhumanisi kusho ukuthi kufanele kutholakale ukuthi kufakwe ngaphakathi kokuqukethwe kwekhasi - kubonakala emibhalweni yombhalo ngokwemvelo, ngemuva kokungena ngemuva kokushiya uhlu lwama-spammy lamabhasi amancane atholakele indawo yonke. Futhi okwesithathu, i-backlink e-SEO imelela isixhumanisi sangaphandle (ngaphandle kwalokho, isixhumanisi esingenayo) esivela kuwebhusayithi ye-third party noma ibhulogi futhi ikhombe amakhasi akho.
Basebenzisa kanjani ikhasi eliyisiqalo?
Kusukela kumbono wokwandisa i-SEO, ama-backlink anembile afika ngokuqondile ekhasini eliyisiqalo yizona zakhi eziphumelela kakhulu ukushayela yonke inqubo yokuhlelwa kwe-website noma yebhulogi yokusesha nge-inthanethi esikalini. Into yukuthi konke mayelana nokusebenza kahle kwabo ku-SEO kulula kakhulu - izimpendulo zangemuva zangaphakathi zihlala njalo ngaphezu kwebhodi eya ku-Google, ngoba zihlanganiswe ngokwemvelo ngokuqukethwe futhi zibukeka eziphilayo. Ngesikhathi esifanayo, iqiniso lokuthi lezi zindlalelo zangemuva zakhiwe ekhasini eliyinhloko lewebhu lesayithi noma ibhulogi ibapha isisindo esikhulu nakakhulu. Kungani? Kungenxa yokuthi ukufika kukhasi lasekhaya, lezi zixhumanisi zangemuva zendawo zizokushayela ithrafikhi yakho yewebhu - kunekhasi elilodwa eliyisiqalo, "isango" elidlulile yilowo nalowo umsebenzisi ovakashela iwebhusayithi noma ibhulogi ukuze afinyelele okuqukethwe kuwo wonke amakhasi.
Ekugcineni, khumbula ukuthi konke mayelana nezixhumanisi zekhasi lasekhaya kuzosebenza kuphela kwizizinda ezigunyaziwe zamandla namakhasi wewebhu ane-PR ephezulu. Ngisho ukuthi emuva kwangemva kwe-context kunesisindo esiningi hhayi nje ngoba sifike ngqo ekhasini lasekhaya, kodwa ngoba yonke iwebhusayithi (noma ibhulogi) ibalulekile futhi Source . Ngakho-ke, yiliphi inani eliyisisekelo elidingekayo ukuze uthole okuningi kwi-backlink yakho yangempela - ikhasi elilodwa eliyisiqalo ngokwayo, noma mhlawumbe yonke iwebhusayithi ethathwe ngesilinganiso? Bobabili!